Woza Friday: Liviki Sileqembu le"Hloseni Arts"
Ncwabakazi 08, 2014
Kulimpelaviki kuhlelo Woza Friday intathelizindaba yethu uJoseph Njanji uvakatshele iqembu le Hloseni Arts elingelinye lamaqembu athuthukisa ukusinwa kwemigido yasendulo elitholakala edolobheni lako Bulawayo.
Iqembu le Hloseni Arts licandwe ngomnyaka ka 1998 libunjwa ngu Reuben Pembedza njalo ekuqaleni kwalo belisenza imidlalo yokulingisa kwathi ngomnyaka ka 2000 lantshintsha unyawo laqala ukusina lokucula ezomdabu wabantu abansundu abatholakala elizweni leZimbabwe.
Leliqembu selike laphuma layaphatheka kumncintiswano embalwa eqhutshelwe emazweni agoqela ayakhelene lele Zimbabwe athi ele South Africa, Botswana kanye le Zambia ikanti like laya lase Algeria lapho eliphenduke liphethe izicoco ezithile.
Lalapha ekhaya like lathola imivuzo ye National Arts Merit Awards iminyaka ilandelana ngo 2008 lango 2009 kodwa ilunga leqembu leli uZanele Maseko uthi basaludinga usekelo lukazulu ekutheni imisebenzi yabo yamukelwe ngabasakhulayo.
Amanye amalunga eqembu le Hloseni ngathi uBeauty Machawira, uChepu Makiwa, uBrian Madumuse, uDarlington Moyo, uSimbarashe Chindira, uKundai Hove kanye lo Samuel Choga.
Bathi bona lapho abenza khona imibukiso yabo kufana lokuthi bayabe bethatha izibukeli bezibhodise kuwo wonke amagumbi amane elizwe le Zimbabwe.
Nampa bengena enkundleni ngengoma yamabhiza abayicula ngolimi lwesiKalanga.
Iqembu le Hloseni liphakathi kwamalungiselelo okuba liphakulele uzulu idlalade lalo lakuqala ekupheleni kwenyanga ezayo njalo abanye elisebenzisana labo ngabagoqela uDumisani Mhlanga yena owaziwa kakhulu ngelithi Imbongi kazulu.
Iqembu le Hloseni litholakala endaweni ye Bulawayo Centenary Park lapho okulendawo yabo abayibiza nge Hloseni Cultural Centre njalo imisebenzi yabo iyatholakala ebulenjini ku You Tube.
Nampa bephuma enkundleni ngeculo elithiwa Ilanga Lethu lona elihlanganisa imigido etshiyeneyo yakwele Zimbabwe njengoba behlabela ngolimi lweSiNdebele kodwa beqoqoda amarimba behlanganisa lengungu.
Woza Friday sileqembu leHloseni Arts